Maqal: Gudoomiye Tigey oo booqday beeraha ROOX ee Gobolka Mudug+Sawiro – SBC
Maqal: Gudoomiye Tigey oo booqday beeraha ROOX ee Gobolka Mudug+Sawiro
Posted by Webmaster on May 28, 2013 Comments
Wax ka baro goobaha dalxiiska iyo beeraha gobolka Mudug qaarkood, gudoomiye Tigey oo booqday beeraha ROOX.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) ayaa bilaabay safaro uu ku kala bixinayo dhulka beeralaydaa iyo wax soo saarka huwan ee gobolka, kuwaasoo uu ku xoojinayo dhiiri galinta wax soo saarka dhulka gaar ahaan beeraha iyo dib u soo noolaynta dhaqankii Soomaalida ee sharafta mudnaa.
Mudane Tigey, oo ay weheliyaan koox wariyayaal ah oo ka tagay magaalada Gaalkacyo ayaa booqday beeraha deegaanka ROOX oo hoos tagta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, si uu qiimeyn iyo dhiiri galinba ugu soo sameeyo beeralayda ROOX, si hormarin ay ugu sameeyaan wax soo saarka beeraha iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay bandhig isugu jira qaabka xoola raacatada iyo dhaqanka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee caanka ay ummadda Soomaaliyeed ku tahay.
Gudoomiyaha ayaa beeraha ROOX kula sheekaystay qaar ka mida ganacsatada beerahaasi kuwaasoo ka warbixiyay qaabka hormarka leh ee ay u soo go’ayaan miraha ka baxa beerahaasi.
Gudoomiyaha Mudug, ayaa indhihiisa ku soo arkay qaybaha kala duwan ee khudaarta ka baxda ROOX sida Canbaha, Mooska,Babayga,Liinta iyo kuwoo kaloo fara badan kuwaasoo dhamaantoodba mira dhal ah, sidoo kale beeraha xiliga uu gudoomiyugu booqanayay waxaa ka daaqayay xoolo kala duwan sida Ari,Lo’o iyo geelba.
Beeraha dhexdooda oo barwaaqo iyo bilici ay ka muuqato ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayay calaamado ka tarjumayo calanka Soomaaliya iyo kan Puntland.
Waxaa halkaasi lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaalida iyadoo ay quruxda dhaqankana ay muujinayeen ragg iyo haween ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka, sidoo kalana gudoomiyahana uu xirnaa.
Dhul daaqismeedka wax beerashada ku habboon ee ROOX ayaa ka mida deegaanada beeralaydaa ee gobolka Mudug, kuwaasoo bulshada gudaha iyo qurba joogtaba ay dalxiis ahaan iyo ka manaafacaadsi dhanka wax soo saarkaa ay oga faa’iidaysan karaan, waxaana taasi ay meesha ka saaraysaa tuhunkii ahaa inaan gobolka Mudug wax lagu beeran karin taasoo u kala cadaanaysa qof walboo booqda ROOX ama ka daalacda aaladaha warbaahinta ee la iska arko.
Dhageyso Wareysi Arintan ku saabsan oo uu Wariye Liibaan Qaran ka qaaday Gudoomiye Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey, RIIX AMA DAAR
Si kastaba dhulka Soomaalida ayaa ka mida ah meelaha adduunka ugu khayraadka badan dhinacyada wax soo saarka beeraha, shidaalka iyo qaybaha macdanta, waxaana gobolka Mudug uu ka mid yahay gobolada haddii loo soo jeesto laga soo saari karo manaafacaad iyo khayraad dabiiciye.